New Tareen Links Asia Iyadoo Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > New Tareen Links Asia Iyadoo Europe
A line tareen cusub ayaa bilaabay, daboolaya Azerbaijan, Turkey, iyo Georgia. line wuxuu daboolayaa badan 820 Kiiloomitir oo caawinaysa dadka freights lagu daro tareenada rakaabka. marka hore, line ka noqon doono ugu horeeyay in ay ku xidhmaan Yurub iyo Shiinaha halka Goldogob Russia. Tareenka ayaa shaqayn doonaan caasimada Azerbaijan ee Baku iyo Tbilisi ee caasimada Joorijiyaan magaalada Kars in Turley. Intaas waxaa sii dheer, Waxaa hoos u dhigi doontaa u waqtiga safarka inta udhaxeysa kaabayaasha tareenada Yurub iyo Tareenka Shiinaha. Madaxweynayaashii Azerbaijan, Turkey, iyo Georgia, iyo sidoo kale wakiilo ka socda Midowga Yurub, ka qeyb galay furitaanka line tareenka cusub.
marka hore, line tareenka waxaa markii hore la qorsheeyay si loo bilaabo in 2010 ka dibna gudaha 2012. Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u tahay line ma marayay Armenia, labada Maraykanka iyo Midowga Yurub ma dhaqaale ahaan gacan ka iyo tan sababtay dib u dhac ah. Intaa waxaa dheer, khadka wuxuu maraa wadamo markii hore lahaa xuduudaha xiran in midba midka kale (shukaansi in ay dib ugu Midowgii Sofyeeti).
Marka labaad, line ah oo la odhan jiray ku 'Eurasian Bridge', xiri doona dhaqaalaha wadamadaas ay u maraa. Chinese alaabta gaadiid ka soo Shiinaha Yurub on line this yar sida 12 maalmood. Intaas waxaa sii dheer, ah tareen geynaynaa 5 milyan oo tan oo xamuul ah sannadkii la lambarkan la filayaa in ay ku boodaan si ay u 17 milyan muddo. Intaa waxaa dheer, this ka dhigi doonaa dekedda qalab in Azerbaijan ugu weyn ee Badda Caspian gobolka.
Azerbaijan ayaa shaacin qiimaha buuxa ee khadka kastaba ha ahaatee waxa la og yahay in ay deymin Georgia $775 si ay u maal qaybta Joorijiyaan of line ah.
Kazakhstan ayaa haatan degtay sida 'Silk Road cusub’ iyada oo ay kordhisay howlaha xamuulka ee u dhexeeya Yurub iyo Shiinaha. Taariikh Kazakhstan adeegay sidii dawlad xira Europe, Aasiya, iyo India. Sababta howlaha xamuulka Kazakhstan dib loogu soo nooleeyay ayaa ah inay jarayso masaafada Yurub iyo Aasiya 10,000 kiiloomitir. Intaas waxaa sii dheer, Kazakhstan ayaa ka badan $3 billion on waddooyinka tareenka ay. Tani waxaa ka mid ah $250 milyan oo qaatay on the Khorgos Gateway. Albaabkan ayaa u oggolaanaya tareennada Shiinaha inay alaabtooda ku wareejiyaan tareennada Yurub iyagoo ka fogaanaya baahida loo qabo in khadadka la beddelo.
Quotes ku saabsan line tareenka cusub
marka hore, Madaxweynaha Azerbaijan ee faallo tareenka
The tareenada Baku-Tbilisi-Kars waa link ugu gaaban oo ugu kalsoonaan karo oo u dhexeeya Asia iyo Europe
Intaa waxaa dheer, Midowga Yurub uga hadashay
Furitaanka tareenka Baku-Tbilisi-Kars waa tallaabo weyn ee xidhnaanta gaadiidka isku xira Midowga Yurub, Turkey, Georgia, Azerbaijan, iyo Central Asia ... weheliyaan Silk Road ee qadiimiga ah,
Tan iyo markii horeba aad halkan, sababta ma qaadan 3 daqiiqo si aad u hesho tigidh ugu fiican tareenka aad safarka soo socda? Meel kasta oo aad qorsheyneysa in ay u safraan ee Europe waxaan kaa caawin karaan inaad hesho tikidhada. Haddii aad raadinayso inay soo aragto Alps ee Switzerland iyo Italy ama laga yaabee booqo dalalka sida Belgium iyo Hungary aan heysano kugu daboolay. Jartaan tikidhka tareenka aad hadda. Bixiso tikidho la isticmaalayo dhammaan hababka lacag bixinta ugu yaqaan
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnew-train-links-asia-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Aasiya #asiaeurope #raillink europeantravel tareen safarka
Waan jeclahay safarka laakiin kama fileynin inaadan sidaa dhihin, Waxaan ahay ruux xor ah oo ku socdaala Yurub kana shaqeeya warshadaha tareenka, waxaan rajeynayaa inaad ka helayso waxa aan qoro - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa ila soo xiriir